नुनमा झेल ! - सुनाखरी न्युज
नुनमा झेल !
Posted on: June 4, 2021 - 1:25 pm
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमार्फत नुन अयात र वितरण निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो । २०२० सालदेखि नेपालमा नुन आयात र बिक्री गरिरहेको सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको ब्यापार खोसिने व्यवस्था बजेटमै गरिनुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको स्वार्थसंग जोडेर चर्चा गरिँदैछ । पूर्व वाणिज्य राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको स्वार्थमा बजेटमै यो विषय उल्लेख भएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारको २२ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी हो । यसले रासायनिक मल, एलपी ग्यास, नुन, चिनी, दाल, चामल, गेडागुडी लगायत वस्तुको व्यापार गर्छ । कम्पनीले १० वर्षयता आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरिरहेको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर दोस्रो बजारमा ११ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२१ मा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने’ भनिएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार आव ०७८-०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा साल्टलाई ‘प्रतिस्पर्धी बनाउने’ विषय उठेको थिएन । बजेटबारे अर्थमन्त्रालयमै भएको छलफलमा पनि यो विषय समावेश नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भने बजार प्रतिस्पर्धी बनाउने विषय कुनै मन्त्रालयबाट आए या नआए पनि कानुनी रुपमा बजेटमा आएको बताउँछन् ।